Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra. Iray amin'ilay Andriamanitra telo izay iray ny Fanahy Masina araka ny Baiboly. Izany hoe Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, ary Andriamanitra Fanahy Masina. Ho jerentsika eto ny momba ny Fanahy Masina sy ny asany.
I. Inona ny Fanahy Masina?
A. Fantatra toy ny olona ny Fanahy Masina
Toy ny solon'anarana fampiasa amin'ny olona no ampiasaina rehefa miresaka momba ny Fanahy Masina. Mazava tsara izany amin'ny Baiboly voasoratra amin'ny dikateny vahiny.
Inona ny solon'anarana voasoratra ao amin'ny Jaona 14:17?
B. Toetran'ny Fanahy Masina
1. Saina: manana fahefana mahay sy mahazo ny zava-misy.
a) Romana 8:27
Ny Fanahy Masina dia manana _________________________________
b) 1 Korintiana 2:11
Ny Fanahy Masina dia mamantatra ______________________________
d) 1 Korintiana 2:11
Ny Fanahy Masina dia mahalaa _________________________________
Inona ny toe-po ananan'ny Fanahy Masina ao amin'ny Efesiana 4:30?
3. Manana fahefana manapa-kevitra sy mandray andraikitra.
Omeo ny ohatra voalaza ao amin'ny:
a) 1 Korintiana 12:7,11 _______________________________________
b) Asa 13:2 ________________________________________________
II. Andriamanitra ny Fanahy Masina
A. Ireo toetrany
Ny Fanahy Masina sy ny toetra maha Andriamanitra Azy
Mahalala ny zavatra rehetra
Misy Azy na aiza na aiza
Tsy misy fiandohana sy fihafarana
Marina sy mahatoky (tsy mivadika)
1 Jaona 5:7, Jaona 16:13
B. Filazana ny maha Andriamanitra
1. Inona ny manambara ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina ao amin'ny 2 Korintiana 3:17?
2. Araka ny Asa 5:3-4, mitovy amin'ny mandainga amin'Iza ny mandainga amin'ny Fanahy Masina?
III. Ny asan'ny Fanahy Masina
A. Salamo 104:30
Nandray anjara tamin'ny inona ny Fanahy Masina?
B. 2 Petera 1:20-21
Mandray anjara amin'ny inona ny Fanahy Masina?
Mijoro ho vavolombelon'i Kristy ny Fanahy Masina
Manamarina fa Jesosy no Kristy
Hampahafantatra an'i Kristy
Tsy milaza momba ny tenany
IV Ny asan'ny Fanahy Masina amin'ny famonjena
Manana anjara lehibe amin'ny tetik'asa famonjen'Andriamanitra ny Fanahy Masina.
A. Jaona 16:1-8
Inona ny asa manokana ataon'ny Fanahy Masina?
B. Jaona 3:5-8
Ateraky ny inona ny mpanota/olona vao tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra?
D. Inona ny ataon'ny Fanahy Masina rehefa voavonjy ny olona iray?
1. Titosy 3:5-6
2. 1 Korintiana 12:13
E. Efesiana 1:13-14
Ahoana ny anomezan'ny Fanahy Masina antoka ny famonjena ny mpino?
Ny tombokasen'ny Fanahy Masina
Ny tombokase dia misy anaran'ny tompony. Manambara fananana araka izany ny tombokase ary manaporofo ny fahamarinan'ny taratasy izay misy izany.
Ny fisian'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika dia mampiseho ny fampanantenan'Andriamanitra ny fandovantsika Azy.
V Ny asan'ny Fanahy Masina amin'ny fiainan'ny mpino.
A. Romana 8:9
Inona ny fifandraisan'ny Fanahy Masina sy ny mpino?
B. Azo heverina ve ny fisian'ny mpino tsy manana ny Fanahy Masina?
D. 1 Korintiana 2:12-13
Inona koa ny asan'ny Fanahy Masina amin'ny fiainan'ny mpino?
E. Fananarana ny mpino
Inona ny fananarana ny mpino mikasika ny Fanahy Masina?
1. Efesiana 4:30 _____________________________________________
2. 1 Tesaloniana 5:19 _________________________________________
3. Efesiana 5:18 _____________________________________________
FENO NY FANAHY MASINA
Ny hoe feno ny Fanahy Masina dia miaina tanteraka eo ambany fahefany. Mitaky fibebahana amin'ny ota izany ary fnkatoavana Azy feno na ara-tsaina, na ara-piniavana, na ara-batana, na inona na inona. Mitaky fahafatesan'ny fitiavan-tena izany.
Ny feno ny Fanahy Masina dia feno ny Tenin'Andriamanitra, izay mibaiko ny fihetsika sy fisainantsika.
F. Galatiana 5:16
Ahoana ny hialàn'ny Kristiana amin'ny ota? _________________________________
G. Galatiana 5:22-23
Rehefa feno ny Fanahy Masina ny mpino dia mampiseho ny vokatry ny Fanahy. Inona avy izany?
1________________ 4___________________ 7___________________
2________________ 5___________________ 8___________________
3________________ 6___________________ 9___________________
Hita soritra eo amin'ny fiainanao ve ireo toetra ireo?
Izao no nosoratan'ny Apostoly Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 6:19-29: "Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy, koa mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo."
A. Inona ny lanjan'izany aminao?
B. Misy tokony ataonao ve hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra amin'ny tenanao?